Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 - Dib u eegista dareemayaasha Xiaomi
Gurigeyga caqliga badan si tartiib tartiib ah ayuu u korayaa. Mid ka mid ah waxyaabihii xigay ee aan go'aansaday inaan ku daro qolkeyga wuxuu ahaa dareemayaal - Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 - oo aan ku helay dallacsiinta Aliexpress. Sidee u shaqeysay? Xor ayaad u tahay inaad dib u eegto!
Waxa aan ka heli karno xirmada iyo aragtida koowaad
Xirmada lafteeda, waxaan ka helnaa Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 oo leh batteri, cajalad lagu dhejinayo qalabka iyo buug tilmaame ah. Buuggaygu wuxuu ku yimid Shiine, laakiin waxaan tuhunsanahay in haddii aad wax ka iibsato Polish qaybinta, buuggu uu ku noqon doono afkeenna hooyo.
Waa inaan qiraa inaan la yaabay sida yar ee dareemahan u yahay. Waxaan u maleynayay in leben 5 × 5 weyn oo ballaadhan uu imaan doono, laakiin halkan waa wax dareemayaal yar oo hagaagsan. Cabbirka shaashadda ayaa igu filan, tirooyinka la soo bandhigayna waa kuwo muuqda. Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, inaadan xitaa u baahnayn inaad eegto dareemahan, maxaa yeelay wax waliba waxay si qurux badan ugu xirmaan arjiga waana halkaas meesha aan ku arki karno dhammaan xogta.
Waxaan go aansaday inay fikrad fiican tahay in miiska la saaro oo keliya.
Waxyaabaha qabow waa in qalabku muujiyo laba weji. Murugo leh marka heerkulka iyo fuuq baxa aysan ku habboonayn isaga, oo uu faraxsan yahay markay wax waliba hagaagaan.
Hadda aan eegno qeexitaanka qalabka.
Isku xirnaanta: Bluetooth 4.2 LE
Heerkulka heerkulka: 0ºC ~ 60ºC
Bixinta korontada: Batariga CR2032
Danab lagu qiimeeyay: 2,5V - 3V
Dhererka: 43 mm
Ballaaran: 43 mm
Dhumucdiisuna: 12,5 mm
Shahaadooyinka: QB / WSDJ 2401-2019
Ka samaysan ABS, PMMA
Heerka qoyaanka 0% ~ 99% RH
Macluumaad Dheeraad ah: muujinta heerkulka 0,1ºC kasta, oo muujinaya qoyaan 1% RH kasta
Sidii aan horayba u soo sheegay, qalabku waa yar yahay, laakiin shaqada ayuu qabtaa. Waxaan ugu xirnaa arjiga MiHome qaab aad u fudud, marka isku dheelitirku waa inuusan kuu keenin wax dhibaato ah.
Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 ee barnaamijka
Codsiga laftiisa, ka dib markaan shidno dareemaheena, waxaan arki karnaa heerkulka hadda ee qolka iyo huurka. Hoosta waxaan ku haynaa taariikh iyo jaantus sida heerkulka isu beddelo halka dareeyuhu istaago.
Markii aan riixno taariikhda gunta hoose, waxaan arki karnaa xog yar oo dheeri ah oo ku saabsan saacadaha, bilaha, ama 6 bilood.
Markii aan guda galno goobaha, waxaan heysanaa xulashooyin aan dejino. Waxaan awoodnaa, tusaale ahaan, inaan shidno "Qaabka ilmaha", kaas oo gacan ka geysan doona sidii loo ilaalin lahaa heerkulka ku habboon qolka ilmaha. Waxaan ikhtiyaar u leenahay inaan dhigno heerka Fahrenheit haddii aan doorbidno heerkulka in lagu muujiyo cutubkan. Waxaan sidoo kale badali karnaa magaca aaladda, maareyn karnaa meesha, la wadaagi karnaa Mi Heerkulka & huurka Monitor 2, cusbooneysiin kara barnaamijkiisa, iwm.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan sameyn karno ayaa ah dejinta otomaatiga si dareemaheena uusan u aheyn oo kaliya dareemayaal laakiin uu sidoo kale wax u qabanayo. Si kastaba ha noqotee, waxaan iibsanaa dareemayaal noocan oo kale ah oo kaliya ma ahan inay nagu wargeliyaan wax, laakiin sidoo kale inay naga dhigaan kuwo waxtar leh.
Otomaatigeyga ugu weyn ilaa hada wuxuu daminayaa huurfiyaha markii fuuq baxa uu gaaro heer cayiman. Si kastaba ha noqotee, waxaan raaci doonaa cusbooneysiinteyda, taageere ka socda Xiaomi, kaas oo bilaaban doona marka dareeraha uu ogaado heerkul aad u sarreeya qolka.
Khibradeyda aan u leeyahay Mi Heerkulka & Uumi-socodka Kormeeraha 2
Hadda waa waqtigii sheeko!
Laba maalmood laambaddayda Miiska Sariirta Miiskiisa 2, Waxay bilaabatay xabado waqtiyo kala duwan oo layaableh sida 9, 12 ama 18 galabnimo. Wax fikrad ah kama aan hayn waxa ay ku saabsanayd.
Markii hore waxaan moodayay inay wax khaldan yihiin WiFi-kayga, laakiin markaa waxyaabo badankood ayaa waali igu noqon lahaa mana ahayn. Markaas ayaan ka fikiray barnaamijka VPN ee aan ku haysto taleefankayga. Taasi ma ahayn sidoo kale.
Waxaan isweydiiyey haddii aan xoogaa caqli badan oo caqli badan ku haysto guriga. Xulashada labaad waxay ahayd in Ariel uu jabsaday nidaamyadeyda oo uu igu jees jeesi jiray. Laakiin taasi ma ahayn sidoo kale.
Ugu dambeyntiina, 3 maalmood kadib, waxaan xaqiiqsaday in markii Mi Miir-kayga & Kulaylka Monitor 2 aan dareemay heerkul aad u sarreeya, ay calaamadda u dirtay laambaddayda si aan muuqaal ahaan ugu muujiyo inaan aad u kululaaday.
Sida muuqata, markaan isku xirayo, waa inaan wax habaaraa oo aan sameeyaa otomaatiga noocan oo kale ah. Hagaag, waxay ku dhacdaa kuwa ugu fiican. Waxaan haystay otomaatiggii ugu horreeyay. Uguyaraan waxbaa kadhacaya gurigaan go'doominta ah kaas oo aan rajaynayo inaan dhowaan kasoo bixi doono.
Si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay in dareemahu shaqadiisa qabsanayo. Waxay sidoo kale sifiican ugashaqeysaa otomaatikada alaabooyinka kale ee Xiaomi sida ... laambad ... ama huuriye. Waxaan qirayaa inaan jeclahay dareemahan yar.
Soo Koobida Miisaanka & Heerkulka Korjoogteynta 2
Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 waa qalab runtii qabow. Waxay fulisaa shaqadeeda labadaba heerkulbeeg gudaha ah iyo kormeerka qoyaanka iyo sidoo kale qalab aan ku sameyn karno noocyo kala duwan oo otomaatig ah.
Haddii qof jeclaado, wuxuu ku dhejin karaa otomatiga laambad si ay ugu wargeliso inuu aad u kulul yahay. Si kastaba ha noqotee, waxaan doorbidayaa in lagu waafajiyo huurka.
Waxaan sidoo kale sugayaa daqiiqada markaan isticmaali karo taageere Xiaomi si aan ugu daro otomaatigani ururintayda. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay waxa dhameystiri doona qolkeyga casriga ah waana ku farxi doonaa sida ay hadda u shaqeyso.
Dheeraad kale ayaa ah inaan arki karno taariikhda isbedelka heerkulka iyo huurka. Shakhsiyan, waxaan jecelahay inaan fiiriyo noocyada jaantusyada sidaa darteed tani waa wax igucusub aniga.
Oo yaanan ilaawin Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 wuxuu muujinayaa isagoo dhoola cadeynaya in heerkulka qolku fiicanyahay ama xun yahay. Waa qalab aad u xiiso badan, laakiin aan waxtar badan lahayn. Haddii aan qalabka ku dhejino darbiga oo aan ka hubin karno heerkulka taleefanka, xitaa ma fiirineyno. Taas macnaheedu waxa weeye in ikhtiyaarkan aan loo baahnayn. Nasiib darrose, codsi nama soo ogeysiinayo minka haddii heerkulku sax yahay iyo in kale. Laakiin sidoo kale waxaan haysannaa doorashadan.
Iskusoo wada duuboo, waa heerkul aad u fiican oo dareemayaal qoyaan leh. Waxaan u maleynayaa inay runtii ahayd iibsi wanaagsan, gaar ahaan maadaama aan si fudud ugu xirmi karno dareemayaasha ka imanaya Shiinaha oo aan ku dari karno dallacsiinta.
Xiaomi Mi Band 6 - horeyba waan u haysannaa, horay ayaan u tijaabineynaa
kooxda smart, mantag 6, xiaomi
Xiaomi waxay soo bandhigtay noocii ugu dambeeyay ee kooxdeeda casriga ah bishii Maarso 29 ee sanadkan. In kasta oo ay weli wakhti inagu sii jiraan illaa inta laga gaarayo bandhigga ugu horreeya ee reer Poland ee Xiaomi Mi Band 6, haddana waxaan ku faraxsanahay inaan tijaabiyo qalabkan dhawr maalmood ...
Sixirka filimka ficil ahaan - Xiaomi waxay soo saartaa filimo
ma 11, xiaomi
Waqtiga xiritaanka filimka iyo u wareegga qulqulka qadka tooska ah, duubista moobilku waxay noqon kartaa horumar iyo xushmad farshaxanka filim sameynta. Istuudiyaha Xiaomi, oo ay aasaastay shirkadda Xiaomi, ayaa bilaabay olole aflaamta moobiilka loogu magac daray "Habeen & Maalin".
Xiaomi waxay kugu martiqaadeysaa inaad soo bandhigto alaabada cusub
Xiaomi waxay kugu martiqaadeysaa inaad soo bandhigto alaabada mudada dheer la sugayay, sida Mi 11 Ultra iyo Mi Band 6. Hordhaca waxaa loo qorsheeyay Abriil. Waxaan sugeynay waqti dheer tan, Xiaomi ayaa ugu dambeyn soo bandhigi doonta alaab cusub! Mi 11 Ultra iyo Mi ...